Diraa qurxa diraawwanii baay'ee, tarree diraa keessa jiran deebisa.
Barruu: Waraantoo diraa.
delimiter (optional): Arfii diraa kan qurxa diraawwanii, diraa keessatti argaman addaan baasuuf fayyadu dha. Durtii daangessuun iddoo arfiiti. Yoo daangessaan diraa dheerinni isaa duwwaa "" ta'e, qurxaawwan diraa kan walqabatan fo'aa malee dha.